Edere site Tranquillus | Apr 5, 2022 | Na weebụ
Excel bụ aha eji ama ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ Microsoft mepụtara, nke ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu na-eji arụ ọrụ ego na ndekọ ego site na iji mpempe akwụkwọ.
Excel ma ọ bụ Microsoft Excel bụ ngwa mgbasa ozi na-ewu ewu. Njirimara ya gụnyere interface nwere nghọta na ngụkọ siri ike na ngwa eserese nke, yana usoro ịzụ ahịa, mere ka Excel bụrụ otu n'ime ngwa kọmputa kachasị ewu ewu taa. Ihe mejupụtara akwụkwọ mpịakọta Excel bụ mkpụrụ ndụ ndị a haziri n'ahịrị na kọlụm. Ọ bụ mmemme dị ike, nwere interface mara mma yana ọtụtụ atụmatụ maka onye ọrụ.
E wepụtara ụdị Excel mbụ maka sistemụ Macintosh na 1985 na nke Microsoft Windows ka ewepụtara naanị afọ abụọ ka e mesịrị, na 1987.
Kedu ihe a na-eji ngwa Excel?
A na-eji ngwa Excel arụ ọrụ dị iche iche dị ka: ngụkọ dị mfe ma dị mgbagwoju anya, ịmepụta ndepụta data, ịmepụta akụkọ na eserese ndị siri ike, ịkọ amụma na nyochaa usoro, nyocha ọnụ ọgụgụ na ego, na mgbakwunye na inwe asụsụ mmemme jikọtara ọnụ. na Visual Basic.
Ngwa ya na-emekarị na nke a na-emekarị bụ: mmefu ego na njikwa ego, njikwa ngwa ahịa, ụgwọ ọrụ ndị ọrụ, ịmepụta nchekwa data, wdg.
Site na mmemme a, ị nwere ike ịmepụta tebụl ngwa ngwa, webata usoro mgbakọ na mwepụ, mee ndekọ ego gị, jikwaa ngwa ahịa, jikwaa ịkwụ ụgwọ, wdg.
GỤỌ Free Jiri uzo nhọrọ
Kedu Excel ndị ụlọ ọrụ na-ejikarị?
Microsoft Office 365 bụ otu ngwungwu kachasị ewu ewu, ewezuga eji ya na kọmpụta na ebe ọrụ ụlọ ọrụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ. Site na ngwa dị iche iche, ọ ga-ekwe omume ịmepụta akwụkwọ nwere ụdị dị iche iche ma ọ bụ jiri ndebiri nke Microsoft n'onwe ya wetara.
Mana n'agbanyeghị ụdị Excel ị na-eji, ha na-enwekarị otu ọrụ ahụ, imewe na ọnọdụ nke ụfọdụ ihe nwere ike ịgbanwe, mana n'ụkpụrụ, mgbe ịmara ụdị Excel nke ọma, ị nweghị ike ijikwa ụdị ọ bụla ọzọ.
Akụrụngwa Excel dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ. Karịa ngwanrọ, Excel bụ ngwá ọrụ dị mkpa n'ime ụlọ ọrụ, dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% n'ime ha, n'ụwa nile. Ọ na-ahapụ gị ịmepụta na hazie akwụkwọ akụkọ maka mmefu ego, ire ahịa, nyocha, atụmatụ ego na ihe ndị ọzọ.
Ịme ngwa ngwa Excel nwere ike ịdị oke mkpa ụbọchị ndị a, na ịmụta ka esi eji ya nke ọma nwere ike ịbara gị ezigbo uru, na mgbakwunye na itinye uru na CV gị, na ime ka ị na-asọ mpi n'ahịa ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ihe ọmụma gị dịkwuo omimi na iji mmemme a, egbula oge ime ya ụgbọ oloko n'efu na saịtị anyị.
Gịnị bụ Excel software? Eprel 5, 2022Tranquillus
gara agaCSE: ike nke CSE n'ihe gbasara ahụike, nchekwa na ọnọdụ ọrụ
-esonụOkwu mmalite nke Excel na isi ọrụ
Bido na nrụpụta dijitalụ